दुई दशक पछिको खुसी, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
दुई दशक पछिको खुसी
, ३० बैशाख २०७४
दुई दशक पछि अर्थात २०७४ साल बैशाख ३१ गतेका हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले नागरिकहरुमा एक प्रकारको खुसीयाली ल्याएको छ। निकै उत्साहपूर्ण रुपमा आफ्नो अमूल्य मतदान गरी हाम्रो भन्दा राम्रो ब्यक्तिलाई जनप्रतिनिधिको रुपमा विजय गराउँदै छन्।
माओवादीले चलाएको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि लामो समयसम्म स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकेको थिएन। यति लामो समयसम्म स्थानीय तहको चुनाव नभएका कारण देशको विकास दुई दशकमात्र हैन सयौं वर्ष पछि धकेलियो।
आम नागरिकहरुले चाहेको र सोचेको जस्तो देशको विकास हुन सकेन। गाउँ घरमा स्थापना भएका सरकारकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय, संघ÷संस्थाहरु सदरमुकाममा ध्वस्तसँगै विस्थापित हुन पुगे। यति लामो समयसम्म आम नागरिकले सास्तीमात्र ब्यहोर्नु पर्यो। देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र सहितको संघीय संविधान जारी भइसकेपछि संविधानको पहिलो कार्यान्वय भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु थियो।
त्यो काम अब हुँदैछ। नेपाली सवै यसमा खुसी हुनु पर्ने छैन किन भने देशभर आइतबारका दिनमा हुनु पर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा हुँदै छ। पहिलो चरमा गरिने चुनावको परिणामले दोस्रो पटक हुने स्थानीयका तहको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने पक्कै छ। सम्मानजनक आफ्नो विजय भएन भने निर्वाचनमा सामेल भएका दलहरु दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिन आनाकानी गर्ने छन्।
पहिलो चरण निर्वाचनमा विजय भएका दलले पराजित दललाई निकै नराम्रो दृष्टिले हेर्नेछन्। दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने गाउँमा जानेछन्। त्यहाँको चुनावलाई सफल गर्न जुन सुकै मूल्य चुकाउन लाग्ने छन्। दोस्रो चरणको निर्वाचनको लागि सरकाले निकै ठूलो कसरत गर्नु पर्नेछ।
यति मात्र हैन दोस्रो चरणको चुनाव गर्ने सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउन सरह नै हुने छ। एक देश एक महिनासम्म दुई देशको भएको आम नेपालीहरुको आभाव गर्ने छन्। आधा नेपालमा जनप्रतिनिधि सरकारको माध्यमबाट चल्ने छ भने आधा देश केन्द्रीय सरकारले चल्ने छ। एउटै देश भित्र यस्तो प्रकारको राज्य राज्य सत्ता चल्ने छ। त्यस बेला सरकाले एक कदम अघि बढेर काम गर्नु पर्ने छ।
यस्ता प्रकारका तमाम परिस्थितिलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढी नागरिकको मन मस्तिष्कमा सरकार बस्न सक्नु पर्दछ । भोलिको कुरा भोलिका दिनमा देखिएला तर आइतबार हुन गइरहेको निर्वाचनमा मतदाताले आफ्नो मत स्वतन्त्र रुपमा आफूले चिनेको बुझेको सही नीति र सवैको सर्वस्वीकार्य उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु पर्नेछ।
जाहे त्यो विजय उम्मेदवारले ५ वर्षसम्म हाम्रो समाज र देशमा देख्नलायक काम गरोस्। भोलिका भावी पुस्ताले पनि त्यसबाट पाठ सिक्ने अवसर पाउन्। यस्तो ब्यक्तिलाई विजय गरेपछिमात्र समाज, राष्ट्रको विकास, प्रगति हुनेछ। जसरी यो दिनमा मतदाताहरु निकै खुसीका साथ मतदान गर्न पाएका छन, त्यसरी नै देश छोटो समयमै काय पलट भएर आम नागरिकहरु खुसी भएको देख्न पाइयोस्।